Owokuqala wazalwa I-Italian cryptocurrency: kwethulwe ngokusemthethweni Winci eMilan, emcimbini womcimbi wango-19 Okthoba, owagxilisa ukunaka kwamaketanga aziwa kakhulu ezentengiso nezinkulungwane zosomabhizinisi abavela kulo lonke elase-Italy.
Umcimbi wethule owokuqala I-Italian cryptocurrency isifikile ekugcineni: kwenzeke a Milan ngo-Okthoba 19 futhi wethula ama-movie amaningi, amanye athakazelisa amanye.
Iphrezentheshini ye-Winci, uhlelo lwayo lokusebenza nezinto ezintsha ezintsha eziguqukayo
Ukuzalwa okusha I-Italian cryptocurrency kwakudale ukulindelwa okuningi nokulindelwe ezinyangeni ezisanda kwedlula. Ukulindela okugcwaliseke ngokumangazayo ekwethuleni okusemthethweni, okungazange kwethule kuphela Ithokheni leWinci, kodwa nezinye izindaba eziningi ezimangalisa. Izinkulungwane zochwepheshe e izinkampani ezivela kulo lonke elase-Italy wabamba iqhaza kulo mhlangano ngo-Okthoba 19 eMilan.
I-Cryptocurrency nokuningi: I-DAPP entsha iveziwe
Iphrojekthi yethulwe ngu Winci e I-AWR inikeza isifunda esihlanganisiwe esinikezelwe Abathengisi e abathengi okuzozuzisa ngamunye wabo. Konke kuqoshwe ku-APP exhunywe kuphrojekthi, manje engalandwa. Ngokuqondile, yinye Dapp, noma u- 'Uhlelo Lokusebenza kususelwa kubuchwepheshe Blockchain ezilandiwe mahhala kuwo wonke ama-mobile ne-PC.
AmaCredits neWinci Tokens azobhaliswa ngqo kwi-Dapp yakho
Sibonga u Dapp, ungabona okwakho ngesikhathi sangempela izikweletu njengoba uziqongelela. THE izikweletu empeleni zilayishwe ngqo kwisicelo. Kepha hhayi lokho kuphela, ngoba ungabheka nesimo sakho Ithokheni leWinci futhi inkambiso yenani labo ngesikhathi sangempela.
Kufinyelelwe imibundu ethile ye izikweletu, uzoba nenketho yokuziguqula ku Ikhuphoni izosetshenziselwa izaphulelo nokuphromotha. THE Isigqebhezana zingasetshenziswa futhi ngokuqondile kusuka ku-App esigabeni esifanele. Imikhiqizo engenakubalwa ijoyina Umjikelezo, ukusuka eCarrefour kuya ku-E-intengo, kusuka kuFeltrinelli kuya kuTrony. Sekukonke, kunamabhizinisi angaphezu kwe-5000 abamba iqhaza ku Isifunda se-Winci. Futhi banda ngokwengeziwe.
Ungaguqulela ama-Credits akho ku-Winci futhi uwabone enyuka kunani
Okunye ongaba nakho amakhredithi akho, njalo ngokuqondile kusuka ku-App, ukuwaguqula abe Ithokheni leWinci. the cryptocurrency empeleni yethulwe ngokusemthethweni ngo-Okthoba 19 futhi isiyatholakala.
Izinzuzo zisobala bobabili abathengi lokho nga Merchant. Ngakolunye uhlangothi, abantu ngamunye bazoba nezephulelo nokukhushulwa ezinkulungwaneni zamabhizinisi futhi amaketanga ezentengiselwano, eqinisweni, i Merchant, nge-euro ngayinye ku izikweletu banikezwe, bazothola kusuka kuma-euro angama-5 kuye kwangama-20. Ekusebenzeni, wonke umuntu uwina nalesi simiso.
Umjikelezo Wezohwebo ubonakala ebalazweni ngayo yonke imisebenzi yokubamba iqhaza
Isifunda awakhayo Winci kuzoqina futhi kuxhumeke futhi ngenxa yemephu, kuyabonakala futhi kuhlelo lokusebenza, lapho bonke umthengisi amalungu e umjikelezo nokunyusa abakusebenzisayo. Kepha akupheleli lapho. UWinci uphinde waphonsa a inethiwekhi Yokuxhumana lapho ungashicilela khona, ngaphezu kokuthunyelwe okuhle kakhulu, izindatshana, okulalelwayo, ividiyo, nakho konke ukunikezwa kwe Merchant.
I-cryptocurrency nayo ingathengwa emaqenjini ama-5 euros
Amathuba aphakanyiswe ngu Winci e I-AWR bakhathazeka nangokuthi kungenzeka bathenge okusha cryptocurrency ekusikeni okuncane. Eqinisweni, kusukela ngomhlaka 16 Novemba kuzokwazi ukuthenga Ithokheni leWinci noma emahlelweni amancane, kusukela ema-5 euros, ngokusebenzisa Ikhadi Lomhlaba Wonke. Noma ngubani ozithengayo uyoba ngokuzenzakalelayo Ambassador futhi izothola amanye amakhredithi ngama-euro angama-20. Njengoba Ithokheni leWinci, noma Amakhadi Omhlaba awukhulisa inani lawo. Ngale ndlela wonke umuntu, ukusuka kosomabhizinisi abakhulu kuya kwizakhamizi ezizimele, uzokwazi ukuba nomunye cryptocurrency okumiselwe ukukhulisa amandla abo okuthenga.
Tags: uhlelo lokusebenza lwe-blockchain umthengisi wesifunda I-Italian cryptocurrency i-cryptocurrency winci